बिज्ञान/प्रविधि – Page5– JanaSanchar.com
हरेक स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई आफ्नो स्मार्टफोनमा लो मेमोरीको समस्याले सताउँदछ । खासगरी जुन स्मार्टफोनमा माइक्रो एसडी कार्ड हुँदैन त्यस्ता स्मार्टफोनमा इन्टर्नल मेमोरी छिटै भरिन्छ । स्पेस कम हुँदा प्रयोगकर्तालाई फोटो तथा भिडियो खिच्न त कठिनाई हुन्छ नै, नयाँ एप पनि डाउनलोड गर्न पाउँदैनन् । यस्तो समस्यालाई हटाउनका लागि स्मार्टफोन..
भारतले आफ्नो अहिलेसम्मकै गह्रौँ रकेट सफलतापूर्वक अन्तरीक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ । बंगालको खाडी क्षेत्रस्थित श्रीहरीकोटाबाट भारतले ६ सय ४० टन तौलको रकेट प्रक्षेपण गरेको हो । रकेटको सफलतापूर्वक परीक्षण भारतीय इतिहासमा महान दिन भएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।यो रकेटको प्रक्षेपणसँगै अब भारतीय अन्तरीक्षण अनुसन्धान संस्था..
धूमकेतु (लामपुछ्रे तारा) ग्रह पृथ्वीसँग अहिलेसम्मकै नजिक आउने
काठमाण्डौं । ‘धूमकेतु जोनसन’ नामको धूमकेतु (लामपुछ्रे तारा)पृथ्वीसँग पहिलो र अन्तिम पटक आज अहिलेसम्मकै नजिक आउने भएको छ । यो धूमकेतु जेठ २२ गते सोमबार पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आउने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी (नासो)ले जनाएको छ । सोमबार पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आउने यो धूमेकतुले पृथ्वीसँगको पहिलो र अन्तिम साक्षात्कार गर्नेछ । क्षुद्र..
काठमाडौं, २१ जेठ । इन्टरनेटमा झुण्डिन रुचाउनेहरुका लागि खुशीको खबर आएको छ । अब इन्टरनेटमा सर्च गर्दा पैसा कमाउन सकिने भएको छ । माइक्रोसफ्टले सर्च इन्जिन बिंगबाट सर्च गर्दा रकम दिने योजना अगाडि ल्याएको छ । कम्पनीले आफ्नो सर्च इन्जिन बिंगलाई गूगलसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ फिचर ल्याएको हो । जसमा सर्च गर्ने यूजरलाई कम्पनीले पैसा दिनेछ..
अपोलो १३ : ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको त्यो मिसन !
आजभन्दा ४७ वर्ष अगाडि तीनजना अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीहरु चन्द्रमाको यात्रा गर्दै थिए । तर, उनीहरुको यात्रा एक भयानक दुर्घटनामा पर्ने वाला थियो । सन् १९७० को अप्रिल १४ । अपोलो १३ पृथ्वीभन्दा ३ लाख २० हजार किलोमिटर टाढा थियो, चन्द्रमाको यात्रा गरिरहेको । अन्तरिक्ष यात्रीहरु फ्रेड हेज, ज्याक स्वाइगर्ट र जिम लोवल आफू चढेको अन्तरिक्ष यानमा..
आमरुपमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने गुगल लगायतका चर्चित सर्च इन्जिनहरुले प्रयोगकर्ताद्वारा सर्च गरिएका कुरा ट्र्याक गर्छन् । सोही हिसाबमा उनीहरुले प्रयोगकर्ताले हेरिरहेको वेबपेजमा विज्ञापन देखाइदिन्छन् र पैसा कमाउँछन् । यदि तपाईंलाई सर्च इञ्जिनले आफ्नो ब्राउजिङ हिस्ट्री स्टोर नगरोस् र आफूले सर्च गरेको सामग्री समेत..
वैज्ञानिकहरुले बर्मुडा ट्राएङ्गलको रहस्य पत्ता लगाएको दावी गरेका छन् । वैज्ञानिकहरुले यस्ता घटनाहरु हेक्सागोनल बादलका कारण हुने गरेको बताएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बर्मुडा ट्राएङ्गलमाथि खोजी गरेका वैज्ञानिकहरुले बर्मुडा ट्राएङ्गलमा धेरै गह्रौं बस्तु तान्न सक्ने क्षमता बादलको हेक्सागोनल आकारका कारण विकास..
अमेरिकी स्पेस एजेन्सीका वैज्ञानिकले एक ताराको वरिपरि धर्तीको आकारका सात ग्रहबारे पत्ता लगाएको छ जुन आफैंमा एक रेकर्ड हो । वैज्ञानिकका अनुसार यी सबै सात ग्रहको सतहमा, यिनका अन्य विशेषताहरुको आधारमा, पानी पाइने पूरा सम्भावना छ । यीमध्ये तीन ग्रहमा जीवनको सम्भावना रहेको र यो ग्रह ‘बस्न लायक’ भएको वैज्ञानिकको दाबी रहेको छ । यी सातै ग्रह..
पेनड्राइभमा फाइल लुक्यो ? निकाल्नुहोस् यसरी
पेनड्राइभ या मेमोरी कार्डमा भएका फाइल कुनैवेला अकस्मात् गायब हुन्छन् । कम्प्युटरमा राखेर हेर्दा, हिडन फाइल भनेर देखाउँछ । पेनड्राइभ या मेमोरीमा फाइलले ओगटेको स्पेस देखाउने, तर फाइलचाहिँ नदेखिने समस्या खासगरी भाइरसले निम्त्याउँछ । यसबाहेक पेनड्राइभ र मेमोरी कार्ड प्रयोग गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ अन्जानमा हिडन गरिएको पनि हुन्छ । तर, यो..